पहिलो फिल्म ‘यात्रा’ ले मलिकालाई राहत देला ? - Janakpur Today
पहिलो फिल्म ‘यात्रा’ ले मलिकालाई राहत देला ?
काठमाडौं : नयाँ वर्षको मौका पारेर रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘यात्रा’ मा केन्द्रीय भूमिका निभाएकी छिन् मलिका महतले । यो उनको डेब्यु फिल्म हो । फिल्ममा कलाकारको जम्बो टोली भए पनि फिल्ममा मुख्य अभिनेता सलिनमान बनिया र मलिका महतको बढी चर्चा छ ।
सलिनका लागि यो फिल्म दोस्रो फिल्म हो भने मलिकाका लागि भने यो पहिलो फिल्म हो । सलिनले यसअघि फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ बाट डेब्यु गरेका थिए ।
रिलिजअघि नयाँ कलाकारको तारिफ हुने तर फिल्म रिलिजपछि कलाकार झण्डै हराउने प्रचलन त नेपाली फिल्मका लागि नौलो भएन । यसअघि रिलिज भएका फिल्मका डेब्यु नायिकाहरु पनि सो फिल्ममा प्रचारका बेला मात्र चर्चामा रहेको दर्शकलाई याद छ ।
यस अर्थमा मलिका महतको करिअर के त्यस्तै होला त ? यो प्रश्न स्वभाविक लाग्छ । यो त उनको काम हेरेर पनि दर्शकले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
यतिबेला भने मलिकाको चर्चामा कुनै कमी छैन । उनको सुन्दरताको पनि खुलेरै तारिफ गरिएको छ । तर फिल्म क्षेत्रमा सुन्दरताले मात्र कलाकार चल्ने होइन ।
यद्यपि ट्रेलरबाट भने मलिकालाई धेरैले नोटिस गरेका छन् । इन्स्टाग्राममा सक्रिय मलिका फिल्म क्षेत्रमा कत्तिको सक्रिय हुने हुन् । त्यसको छिनोफानो त समयले देखाउला । अहिले भने उनलाई यो फिल्मले राम्रै फाइदा पु–याउने आशा गरिएको छ ।
चैत्र २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको यो फिल्मलाई सम्राट शाक्यले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मले सार्वजनिक गरेका गीत तथा ट्रेलरले राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेका छन् ।
१२ जना नेपाली किशोरीको नयाँदिल्लीबाट उद्धार
हावाहुरी प्रभावितहरु खुल्ला ठाउँमा शौच गर्दै, रोग फैलिने खतरा !